Nhau - Chimwe chinhu chausingazive nezve kukwenenzverwa paGlass Door Fridge yako
Waiziva here kuti mafiriji emagonhi egirazi anoumba condensation (mvura) kunze kwegirazi munzvimbo dzine hunyoro hwepamusoro? Izvi hazvingope kutarisika kwakashata chete, asi zvinogona kukonzera kuti mvura iumbe pauriri hwehuni, zvichikonzera kukuvara kusingagadzirike kana kuita kuti uriri hwematairi hutsvedze zvine njodzi.
Havasi vanhu vazhinji vanoziva izvi kana vachitenga girazi remusuo firiji sezvazviri kare kare girazi gonhi raingoshandiswa zvekutengesa firiji muzvitoro nezvitoro nezvimwe. Asi ikozvino nekukura kwekugadziridza boom uye nzvimbo ye alfresco bvisa mafiriji egonhi regirazi ari kuva edition dzimba dzose dzine uye dzinoda.
Condensation inoumba zvakanyanya kana muine mvura mumhepo (humidity), uye nekuti mukati mefiriji kuchitonhora, girazi rinotonhora zvakare, uye izvi zvakasanganiswa nemamiriro ekunze ane hunyoro kunze kwefiriji zvinoita kuti mvura iumbe, senge mangwanani-ngwanani iwe. ona mahwindo emukati memba akaputirwa, girazi richiri kutonhora kubva kunze zvekuti mvura inoumba mukati.
Zvino kuti ndikupei pfungwa yezviri kutenderera mazuva ano sezvo vasiri vazhinji vanoedza kurwisa dambudziko iri zvachose, takaita zvinyorwa zvakakosha;
1. Normal dual glazed (2 x panes) mafiriji ane magirazi enguva dzose anozotanga kuita condensate mukati me50-55% humidity, iyi ndiyo chiyero chemusika uye idzi dzinodira mvura mune chero chinhu chinopfuura 65-70%.
2. Triple glazed units inoshanda zvirinani sezvo peni yekumberi isingatonhore nekuti tine 3 x layers kwete 2, saka kazhinji 60-65% yakanaka kwazvo kupfupika kusati kwatanga kuumbwa.
3. Zvadaro tinoenda muLOW E girazi, ichi chifukidziro chakakosha chinoenda pagirazi rinoratidzira kupisa kwemaawa 70% zviri nani, zvinonyanya kuchengetedza kutonhora zviri nani uye zvinobatsira kuchengetedza girazi rekunze rinodziya. Zvizhinji LOW E ichawana kusvika 70-75% condensation isati yatanga kuumbwa.
4. Argon Gas Kuzadza - Iyi nzira iri muzvikamu zvakawanda uye inobatsira kudzivirira girazi repamberi kubva pakutonhora sezvo rinopa jira pakati pe 2 x panes yegesi, izvi zvinosanganiswa nechero ipi zvayo pamusoro apa zvichabatsira zvishoma kune imwe 5% kusati kwaita humidity.
5. Girazi Inopisa - Nzira chete ye 100% kumisa condensation pagirazi girazi rinopisa. Izvi zvinoshandisa firimu rinochajiswa magetsi pa low voltage rine simba rinoita 50-65 Watt, saka irori rinenge riri shoma rakapetwa kaviri simba rekushandisa kweyuniti, mazhinji acho kakapetwa katatu simba. Izvi zvinogona zvakadaro kumisa condensation pamuviri kana musuo furemu izvo zvakare zvakanyanya, zvakajairika.
6. Condensation pamuviri uye dhoo furemu kwakajairika muzvikamu zvakachipa. Mafuro maitiro ekuvharisa kwemukati memuviri anofara kwazvo mumafekitori mazhinji uye basa rakashata rinopupuma rinogona kukonzera marudzi ese enyaya dzekutsikisa, kunyanya kana iyo unit iri simbi isina tsvina. Kutonhora kuchiri kubva mufiriji kuenda kuzvikamu zvegonhi nemumativi efiriji, izvi zvinokwanisa kuita condensate sezvakangoita girazi, saka zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti mutengesi wako ane izvi zvakavharwa. Pane nzira dzekurwisa izvozvo nekuita kuti pombi inopisa chikamu checondenser chifambiswe nemumadziro emukati.
Saka that was a short lesson on condensation, kuti vanhu vasabatwe nekusaziva zvavari kutenga.